पत्रुस म, युरोप एक विन्डो मार्फत कटौती भएको, रूसी व्यापार को सक्रिय विकास र साइबेरिया को विकास गति दिए। को tsar गरेको तल को आँखा अघि छन् Tsar-प्रर्वतक उदार वितरण प्राथमिकता, भूमि, कारखानों, प्रतिभाशाली र संसाधन उद्यमीहरू। आफ्नो शांत Highness राजकुमार Menshikov - छैन केवल एक राजधानी स्थिति, उच्च समाज को प्रभाव प्राप्त गरेको छ जो। Aristocrats भयो कालिगढहरु यसको काम गर्न सक्षम, आफ्नो खल्ती लागि मात्र होइन तर राज्य शक्ति लागि radeyuschie।
Demidov गरेको राजकुल पनि यूराल र साइबेरियन क्षेत्रहरु, को स्थापना को विकास गर्न एक विशाल योगदान गरेको छ उद्योग, खानी उद्योग, खनिज अन्वेषण। लाभ भाग्य, को Demidov प्रत्येक कला विकास गर्न उदार योगदान गरे, विद्यालय, orphanages र अस्पताल निर्माण। रोड Demidovs सानो टुला gunsmith Demida Grigorevicha Antufeva, राजा बन्दूक सफलतापूर्वक प्रस्तुत संग थाले यसको आफ्नै उत्पादन को।
पहिलो Demidov कारखाना
महिमा र आदर पुरानो जेठो छोरा ल्याए Demida - Nikita। उहाँले ठिक-witted, entrepreneurial आत्मा, काम को लागि एक विशाल क्षमता द्वारा प्रतिष्ठित थियो। यो थियो आफ्नो अधीनमा पत्रुसले म टुला हतियार गुणस्तर आकलन गर्न सक्षम थियो। छैन विदेशी बन्दुक गर्न कमसल गुणस्तर, र तिनीहरूले धेरै सस्ता खर्च: अंकगणित सरल थियो। त्यसपछि राजाले Nikita सेना को लागि हतियार को आपूर्तिकर्ता गर्न आज्ञा दिनुभयो। यो महान् उत्तरी युद्ध समयमा भयो। पत्रुस म टुला प्रान्तमा सम्पत्ति फ्लेचर देशमा Demidov प्रदान गर्न, र भूमि दिन Scheglovskaya कोइला मा धनी भेट्यो मा उत्पादन सुनिश्चित गर्न आदेश 1701 मा एक उर्दी जारी।
शक्ति सक्रिय कारखानों को निर्माण मा लगी भएको छ, राजा राज्य र निजी व्यापार बीच सहयोग को लाभकारी पहिचान गर्न द्रुत थियो। अझै पनि 1702 मा यूराल मा निर्माण Verkhotursky बोट अन्तर्गत5वर्ष को लागि खजाना निर्माण लागत भुक्तानी गर्न र सेना हतियार र धातु आपूर्ति गर्न दायित्व संग Nikita Demidov गर्न दिइएको थियो। त्यसैले हामी प्रसिद्ध Demidov बिरुवाहरु निर्माण र विकास गर्न थाले। Demidov को 1917 क्रान्तिको अघि 250 वर्ष यूराल मा शासन गरे। कि पछि, सबै भन्दा महान परिवार जस्तै, तिनीहरूले संसारभरि छरिएका छन्। परिवारको सानो हानि परिवारको इटालियन शाखा भइरहेको छ, र रूस मा रहेका गर्नेहरूलाई, गोली वा deprivation को मृत्यु थिए।
औद्योगिक सम्पदाको Demidovs
को Demidov बिरुवाहरु को इतिहास - रूस मा औद्योगीकरण को पहिलो लहर को एक विजय मार्च। हाम्रो आफ्नै व्यवसाय सुसज्जित, Demidov शहर बहिरा यूराल thicket मानिसहरू यूराल पहाड मा, तर पनि साइबेरिया, Crimea मा मात्र होइन खनिज स्काउटिंग स्थापित, सडक निर्माण, पूर्वाधार विकास, Inhabited।
राजाको हात को पहिलो बोट निर्माण Demidov छ, तिनीहरू सबै एक फलाम को उत्पादन मा केन्द्रित थिए थियो औद्योगिक उद्यम 1727 मा, 1702 मा प्राप्त भएको थियो:
आफ्नो छोरा ठूलो जोस Nikita Demidov Akinfiy को मृत्यु पछि परिवार व्यवसाय विस्तार गर्न थाले, र 1745 मा Demidov कारखानों विभिन्न निर्माण थिए भएको यूराल को क्षेत्रहरु र साइबेरिया। को Demidov राजवंश इतिहास लागि कुल 50 औं उद्यम आयोजित। हतियार - सम्पत्तिहरू फलाम बिरुवाहरु र mednoplavilnye, उत्पादन को मुख्य निर्देशन थिए। सक्रिय खानी व्यापार विकास उद्यम को काम सुनिश्चित गर्न। तर, सबै उद्यमीहरू जस्तै Demidov र सम्बन्धित शिल्प मा लगे। को यूराल बारुद अनमोल र अर्ध-रत्नहरू यस खानी र प्रशोधन, सुन निकासी र चाँदी।
Demidov कारखानों, मेरो-खानी र अन्य प्रविधी कम्पनीहरु एक लाभ मालिक, केही उद्योगहरूमा Demidov गरेको एकाधिकार बनाउन बनाउन। विकास, खानी, smelting र तामा इच्छित लाभ उत्पादन छैन, तर मामला बन्द गर्न को यातायात को राजवंश नियमहरूमा थियो। तामा बर्तन - र त्यसपछि Akinfiy Demidov व्यापार अर्को "सुन मेरो" फेला परेन।
कपर samovars कुनै पनि परिवारको लागि महंगा खरिद, तिनीहरूले टाढाबाट देखि ल्याइए थिए। को Nizhniy Tagil बोट मा Demidov सबैभन्दा फरक तामा samovars सहित, धातु बनेको व्यञ्जन उत्पादन सुरु गर्दा अवस्था परिवर्तन भयो। तिनीहरूले पकौडी, odoriferous जडीबुटी आधारित तातो चाय खाना पकाउने, तल ल्याए खाना पकाउने लागि उत्पादन गरेका थिए। Akinfiy Demidov रूसी उद्योगपति पहिलो, धातु बर्तन को ठूलो उत्पादन भएको थियो। उच्च गुणस्तर को घरेलू वस्तुहरू Demidov उत्पादन, तर कार्यान्वयन विभिन्न। प्रत्येक जेब मा उपलब्ध थियो लागि उनि शासकहरुले किसान प्राप्त, र सही सौन्दर्य छ।
आधारित Demidovs यूराल बिरुवाहरु र आज आफ्नो काम जारी राख्न। उदाहरणका लागि, Sverdlovsk क्षेत्रमा आधुनिक इस्पात कारखाना, लोकप्रिय पुरानो रूपमा उल्लेख गरिएको छ जो छ - Demidov काम गर्दछ। Kamensk-Uralsky प्लान्ट 1947 सम्म यहाँ रक्षात्मक प्रोफाइल पछि बर्तन को उत्पादन को लागि एक सानो कार्यशाला खुलेको थियो। गैर-स्टिक कोटिंग संग एल्यूमीनियम cookware को उत्पादन मा आज JSC रूसी नेता।
Demidov कारखाना एल्यूमीनियम cookware
Demidov कारखानों अन्तस्करणले मा निर्मित थिए, तिनीहरूले नवीनतम प्रविधि संग सुसज्जित थिए, सबै भन्दा सुविधाजनक स्थान, विकास पूर्वाधार चयन गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई थुप्रै "Demidov कारखाना।" अब भनिन्छ Tableware, Kamensk-Uralsky मा Demidov गरेको सम्पदाको आधारमा उत्पादन बैठक आधुनिक आवश्यकताहरु। आधुनिक उत्पादन Demidov को उपभोक्ता उत्पादन प्रयोग गर्न सजिलो, व्यावहारिक र सुन्दर को राय मा।
एल्यूमीनियम बर्तन - लगभग अनन्त अधिग्रहण, यो एक बहु-generational परिवार रूपमा सेवा गर्दैछन्। गुणस्तरीय sokovarki steamer र, स्वादिष्ट र छिटो आकस्मिक भोजन पकाउन को जाडो लागि तयारी गर्न अनुमति दिन्छ। पनि JSC "प्लान्ट Demidov" एक गैर-छडी cookware लाइन शुरू भएको छ। Teflon कोटिंग संग बर्तन र धूपदान रूस मा एक उच्च मांग, आफ्नो उत्पादन निरंतर वृद्धि गरिएको छ छ। उपभोक्ताहरु सुरक्षित र गुणस्तर उत्पादन को एक नयाँ मोडेल प्रस्ताव।
Demidov पहिलो बीच, को यूराल मा कारखानों मात्र होइन रूस मा तर पनि विदेश कास्ट धातु उत्पादन छुटाउन। Demidov फलाम "साइबेरियन सेबल" स्वीडिश र अंग्रेजी गुणस्तर मा competed र अक्सर प्रतियोगिता मा जित्यो।
आज येकाटिरिनबर्ग मा Demidov आरन ज्ञात छ। कम्पनी ड्रिलिंग, तेल र ग्याँस उद्योग को लागि डाली धातु उत्पादन उत्पादन गर्छ। एक आधुनिक धेरै उद्यम डाली लागि जानिन्छ "Jakub Deml" फलाम बार ठीक कारीगरी स्मारकों। वस्तुतः असीमित छन् संयंत्र मा विभिन्न धातु को कलात्मक र औद्योगिक कास्टिंग को संभावना, त्यहाँ व्यक्तिगत आदेश को एक नम्बर कार्यान्वयन गरिएको छ।
यूराल र साइबेरिया - औद्योगिक आवेदन खनिज Demidov अन्वेषण र निकाल्न पहिलो थिए जहाँ धनी क्षेत्रहरु। सुन र चाँदीको शिल्प 1736, अनमोल धातु जम्मा Altai मा पत्ता थिए देखि राजवंश ध्यान को वस्तु बनेका छन्। अफवाहहरु अनुसार प्रारम्भिक विकासमा गोप्य सार्वभौम आँखा द्वारा आयोजित गरियो। लामो समय को लागि यो शुद्ध चाँदी smelt सम्भव थियो। केवल कारखाना Saxon मालिकको पूर्ण-fledged उत्पादन स्थापना मा सफल को आगमन संग। सर्पले पहाड मा Altai बारुद धेरै लाभदायक साबित भयो। Demidovs पनि शहर Zmeinogorsk स्थापित, आफ्नो सक्रिय विकास सञ्चालन।
आभूषण आज बनाउने
Demidov आभूषण कारखाना बर्नाउल मा स्थित छ। यो Altai क्षेत्रमा आधुनिक ठूलो मात्रा उत्पादन हो। मात्र Yakut - बहुमूल्य धातु राष्ट्रिय विकास र हीरे प्रयोग आभूषण बनाउन लागि। मालिकको इटालियन र जर्मन निर्माण को सटीक उपकरण मा काम गर्दै छन्।
निर्मित आभूषण संख्या कम्पनी सबै दुनिया भर थोक प्रसव बनाउन अनुमति, तर मास्टर खुसीसाथ लिएको र टुक्रा काम। ग्राहक मा ज्वैलर्स एक व्यक्ति डिजाइन विकास, अनमोल र अर्ध-रत्नहरू टिप्न। हरेक उत्पादन - को जौहरी गरेको कला को एक उत्कृष्ट नमूना। Demidov बिरुवाहरु नयाँ वातावरण ज्यान जारी, तर नवीनता र गुणस्तर को परम्परा राख्ने। आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी र सबैभन्दा मांग ग्राहकहरु बीच मांग गर्दै छन्।
Demidov बिरुवाहरु आफ्नो जीवन बिताउन लामो छ। केही कुरा irretrievably गुमाए, नष्ट, तर धेरै कम्पनीहरु अझै पनि काम र आफ्नो संस्थापक महिमा छन्। निर्माण Demidovs शहर जीवनको अब पूर्ण छ र बढ्न र विकास गर्न जारी। राजकुल सञ्चालन खनिज स्रोतको सर्वेक्षण, अझै पनि सान्दर्भिक छन्।
जीवनको व्यावहारिक पक्ष बाहेक, Demidov दान काम धेरै गरिरहेको। समय मा आफ्नो जम्मा रकम भारी र एउटा सानो देश को बजेट अनुरूप थिए। अब Demidov को नाम संग सम्बन्धित ताजा पहल छन्। उदाहरणका लागि, 1991 मा, आफ्नो जीवन Demidov आन्दोलन आफ्नो सम्मान मा फंड द्वारा स्थापित भएको थियो थाले। को आन्दोलन पछि आधारभूत विचार पुरानो परिवार उदाहरण को लागि fatherland सेवा छ। यो कोष सामान्य मा समर्थन वैज्ञानिक अनुसन्धान, कला, शिल्प, संस्कृति, ऐतिहासिक सम्पदा अध्ययन गरिएको छ। यसको गतिविधिहरु रूपमा फाउंडेशन कृषि परियोजनाहरू, सैन्य-औद्योगिक जटिल र थप प्रोत्साहन दिन्छ। को लेक्चर को भाग को रूप मा, स्मारक लोक परम्परा reviving, पार्क बनाउन, स्थापित छन्।
अवलोकन, उत्पादन र समीक्षा: JSC "Arzamas साधन बनाउने पी Plandina पछि नाम बोट"
कम्पनी को वित्तीय परिणाम विश्लेषण: प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन
समारा Metallurgical प्लान्ट: इतिहास, उत्पादन, उत्पादन
नवीनतम रूसी सैन्य विकास। होनहार रूसी सैन्य विकास
परिचित र अपरिचित फर्श टायल: फर्श।
कन्वेयर बेल्ट - संचालन गर्न तनाव को एक राज्य
Immortelle: उपयोगी गुणहरू
बिल्ली मा मिर्गी: कारणहरू, लक्षण, उपचार
यो फेसबुकमा दूत प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
डाह - प्रेमको चिन्ह? प्रेम, ईष्र्या, भरोसा
यो रहस्यमय र malopoznannoe निर्वात
पर्यटन रियो दि जेनेरियो - पनि सबै भन्दा उत्सुक यात्री को सपना